Duties and Responsibilities of Hotels and Tourism Licence Department
Duties and Responsibilities of Hotels and Tourism Licence Department	HomeAbout MyanmarGEOGRAPHYCLIMATEPOPULATIONRELIGIONLANGUAGECULTUREHISTORICAL BACKGROUNDAbout UsMYANMAR HOTEL AND TOURISM LAWDuties and Responsibilities of the DepartmentsBilateral Tourism AgreementsTourism Investment EnvironmentGuide to Investment and Doing BusinessBusiness EnvironmentBusiness OrganizationDirectives for Coastal Beach AreasAdministration and Finance Department (DHT)Hotels and Tourism Supervising DepartmentInternational & Regional Cooperation Department (DHT)Latest NewsDestinationFestivalsDestinationIntroducing MyanmarGOLDEN SMILESNATIONALITIESGOLDEN SIGHTSGOLDEN ARTSGOLDEN OPPORTUNITIESPUTAOEco-TourismKakaborazi ParkMyaing Hay WunIndawgyi Lake SanctuaryNat Ma Taung National ParkMeinmahla KyunZoological GardensAlungdaw Kathapa National ParkHlawaga ParkPopa Mountain ParkShwesettaw SanctuaryInlay LakeSein-Ye Forest CampChatthin SanctuaryBotanical GardensMoneyingyi WetlandTourist InformationDOs & DON'TsPERMITTED AREASUseful LinkHelpful NumbersEmbassyMyanmar Embassies AbroadForeign Embassies in MyanmarE-VisaTourism PoliceSERVICESHOTELS & RESORTSTOUR COMPANIESTOUR GUIDECRUISES & YACHTS COMPANIESCarTourist TransportFlight SchedulesAirlines in MyanmarLinks of the airline websitesDomestic Train SchedulePUBLICATIONHANDBOOKSVisitors' GuideTOURISM STATISTICSASEAN Tourism StandardsArticles (Englsih)Articles (Myanmar)Tourism BrochureVideosASEAN TOURISMVisit Asean@50IndonesiaPhilippinesSingaporeThailand
Planning and Statistics Department’s Responsibilities	Print Email 1. Reporting the progress and planning to short term, long term and yearly plan.2. Negotiating and implementing the projects of Ministry and States & Regions.3. On behalf of the Ministry, reporting to other Ministries by collecting the statistics data.4. Emphasizing to be correct in collecting the statistics data.5. Collecting and storing the documents and data by using computerized technology.6. Continuously monitoring in collecting and distributing these data by networking with States and Regions.7. Implementing the e-government and information technology system.8. Assessing and analyzing the research.9. Maintaining the performance record of organizations that are supervised by MOHT by utilizing the ICT.
စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ တာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ
၁။ နှစ်ရှည်/နှစ်တို၊ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံခြင်း၂။ ၀န်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ရန် စီစဉ်ခြင်း၃။ ၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာနအားလုံး၏ စီမံကိန်းစာရင်းအင်းများကို စုစည်း၍ ၀န်ကြီး ဌာနကိုယ်စားအစီရင်ခံခြင်း၎။ စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအား ရယူစုဆောင်းရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက်ကောက်ခံမှုနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအလိုက်ကောက်ခံမှုများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၅။ သတင်းအချက်အလက်ကန်းဂဏန်းများအား ICT နည်းပညာသုံးစွဲ၍ စုစည်းထ်ိန်းသိမ်းခြင်း၆။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် Network ချိတ်ဆက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စု ဆောင်းခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစဉ်ကြီးကြပ်ခြင်း၇။ E-government နှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၈။ သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်၍ အကဲဖြတ်စိစစ်ခြင်း၉။ ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူကြီးကြပ်သည့် အသင်းအဖွဲ့များ၏လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း များအား ICT နည်းပညာဖြင့် သုံးသပ်၍ထိန်းသိမ်းခြင်း www.elicence.tourism.gov.mm
Myanmar Hotelier Association http://www.myanmarhotelier.org Myanmar Tourism Federation http://www.myanmar.travel/	You are here: Home // Duties and Responsibilities of Hotels and Tourism Licence Department